ကောင်းမွန်ဝင်း: “Say no to racism ”
“Say no to racism ”
လူမျိုးဘာသာခွဲခြားမှုဆန့်ကျင်ရေးနဲ့ စစ်ဆန့်ကျင်ရေး အဖြစ် နံမည်ကြီးလူကြိုက်များတဲ့ သီချင်းတွေထဲက သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို အခုတလော ကျွန်မသိပ်သတိရနေမိတယ်။ သီချင်းစာသားကိုတွေ့ရင် သံဇဉ်ကိုကြားယောင်မိသလို၊ သံဇဉ်ကိုကြားလိုက်တာနဲ့ စာသားအဓိပ္ပါယ် ကို ခံစားနားလည်စေတဲ့ အထိ တစ်ကမ္ဘာလုံးက လူတွေကို ဖမ်းစားနိုင်တဲ့ ဒီသီချင်းကို မကြိုက်တဲ့ သူတွေလည်းရှိမှာပါပဲ။ တချိန်တခါမှာတော့ အပြစ်မဲ့သူတွေကို လေယဉ်ပျံကြီးနဲ့ တိုက်သတ်တဲ့သူတစ်စုကို မှတ်လောက်သားလောက်အောင် သင်္ခန်းစာပေးစစ်တိုက်ဘို့ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ နိုင်ငံကြီးတစ်နိုင်ငံဟာ ဒီသီချင်းအပါအ၀င် ငြိမ်းချမ်းရေးသီချင်း အချို့ကို ထုတ်လွှင့်မှု ရပ်ဆိုင်းလိုက်ဘူးပါတယ်။ သီချင်းရဲ့ စာသားဖြစ်တဲ့မူလကဗျာကို ဒုတိယဇနီးသည်၊ အရှေ့တိုင်းသူ က ငယ်ရွယ်စဉ်မှာ ရေးစပ်ခဲ့ပြီး၊ လုပ်ကြံခံရပြီး သေဆုံးသွားသူ၊ ခင်ပွန်းသည် အနောက်နိုင်ငံသားက ပြန်လည်သီကုံးစပ်ဆိုခဲ့တာပါ။ ဘာသီချင်းလဲဆိုတာ သိသွားပြီပေါ့နော်။
သီချင်းစာသားတွေကို ကျွန်မစိတ်ကြိုက်ခံစားဘာသာပြန်ထားတာနဲ့ အတူ မူရင်းသီချင်းစာသားနဲ့ တွဲပြီး ပို့စ်တင်လိုက်ပါတယ်။
ဒို့ခြေထောက်များအောက် ငရဲပြည်အ၀ီစိကို လည်း မရောက်နိုင်ပါဘူး။
တကယ်က ဒို့ခေါင်းပေါ်မှာ မိုးကောင်းကင်တစ်ခုတည်းပါ
ဒို့လူသားတွေ အားလုံးအတူ အသက်ရှင်ချစ်ခင်နေနိုင်ကြလိမ့်မယ်။
မင်းကတော့ ငါ့ကိုထင်မယ်။ “ဒီကောင်ဟာ စိတ်ကူးယဉ်”……
ငါတစ်ယောက်ထဲ မဟုတ်ဘူးသူငယ်ချင်း၊ မင်းလည်းပါတယ် တစ်နေ့မှာ၊
မင်းကော၊ ငါကော၊ ဒို့ အားလုံးကော ပေါင်းမိစည်းကပ်လို့
မဝေးပါဘူးဆိုသော အနာဂတ်၊ နောက်ဆုံးရလဒ်မှာ ကမ္ဘာဆိုတာ
မင်းသာဆို စိတ်ကူးပုံဖေါ်တတ်မှာပါ ၊ “ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာမရှိဘူး” လို့
ဒါဆိုရင် ဆာလောင်ခြင်း၊ တက်မက်ခြင်း ကိုမသိ
အားလုံး ဒို့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမ၊ ကမ္ဘာကို ဝေမျှလို့နေထိုင်နိုင်ကြလိမ့်မယ်။
မင်းကတော့ ငါ့ကိုထင်မယ်။ “ဒီကောင်ဟာ စိတ်ကူးယဉ်”…………
၁၉၇၁ခုနှစ်မှာ ဂျွန်လီနွန် (John Lennon) စပ်ဆိုသီကုံးခဲ့တဲ့ imagine သီချင်းစာသားပါ။
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဘာသာမတူလူမျိုးကွဲသော်လည်း နေထိုင်ရာနိုင်ငံ၊ မိခင်ဇာတိမြေ၊ ချစ်မြတ်နိုးရတဲ့ တိုင်းသူပြည်သား၊ ယုတ်စွအဆုံး ကိုယ့်မိသားစုလေးအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လူသားအားလုံးအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကောင်းသောဘက်မှ ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာပြီး ကြိုးစားနေကြသူ များအားလုံးကိုသော်လည်းကောင်း၊ ထိုကဲ့သို့သော ပုဂ္ဂိုလ်များကို အားပေးကြသူများကိုသော်လည်းကောင်း အစဉ်ထာဝရလေးစားပါကြောင်းကို ဒီပို့စ်လေးနဲ့ ဂုဏ်ပြုပါတယ်။
ရေးသားသူ Myanmar Good Knowledg Co., Ltd at Tuesday, September 28, 2010
ဒီသီချင်းကို ဟိုတလောကမှ သေသေချာချာ
ကဗျာက ကောင်းလိုက်တာ၊ ဘာသာပြန်ပေးတာ
ပြန်ဆိုတာလည်း ကြည်ဖူးတယ် အစ်မ
သီချင်းလေး ကောင်းတယ်နော်။ တော်တော် အဓိပ္ပါယ်လည်း ရှိတယ်။
နားထောင်ဖူးပေမယ့် တ၀က်တပျက်မို့ အပေါ်ယံရှပ်ကြားဖူးတာပဲ ရှိတယ်။ ဘာသာပြန်ပေးတာ အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒီသီချင်းလေးကို စာသားအပြည့်အစုံ မသိရခင်ကတည်းကလည်း ကြိုက်တယ်..
ကော်နီ ဆိုထားတဲ့ မြန်မာလို သီချင်းလည်းကြိုက်တယ်။။။
အခုလည်း သေချာ နားထောင်သွားတယ်..
လေးနက် ငြိမ်းချမ်းတဲ့ သီချင်းလေးပါဘဲ။
i like very much that songs.
It is meaningful song.I think if everyone can respect each other and their religious,our world will very peaceful.
ကမ္ဘာ့ရွာကြီးအောက်မှာ ဘာသာတစ်မျိုးထဲ လူမျိုးတစ်ခုထဲရှိပြီး စိတ်တူကိုယ်တူ ဖြစ်နေကြရင် အားလုံးဟာ နတ်ပြည်တမျှ ဖြစ်မှာပါ။ သီချင်းစာသားလေး အရမ်းအဓိပ္ပါယ်ရှိပါတယ်။
အမ.. ပြီးခဲ့တနင်္ဂနွေနေ့က လျာကိုက်မိတယ်။းဝ))
ကဲဗျို့.. ခေတ်မှီသူတိုင်း ကုလားကို ဘုံးတော်ဖွဲ့ရသည်တဲ့။ ကျုပ်ကတော့ ခေတ်မမှီချင်ပါဘူး။ ဒီဘလော့ကို ခေတ်မှီစေချင်ပါတယ်။ လွမ်းဆွေ ဘလော့မှ ကုလားဘုန်းတော်ဘွဲ့ထားတဲ့ စားသာတွေကို ပြန့်ဖြန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ပျော်ရွှင်ပါစေ
အစ်မတို့ ဘလော့သမားတွေက အဆင့်အတန်းလုံးဝကို မရှိဘူး။ ဦးဏှောက်က ကြက်တူရွေးနဲ့အတူတူပဲ . .. ကိုယ်ပိုင်ဦးဏှောက်မသုံးပဲ သူများပြောတာ လိုက်ပြောတယ်။ စာအုပ်တွေ မီဒီယာတွေက ရေးထားတာတွေကို အလွတ်ကျက်မှတ်ပြီး ပြန်ပြောနေကြတယ်။ မွတ်ဆလင်ကိစ္စဆိုရင် ဘာမှလေ့လာတာမဟုတ်ဘူး။ မီဒီယာတွေက နှုတ်တိုက် သင်ပေးထားတဲ့အတိုင်း မွတ်ဆလင်ဘာသာက ငြိမ်းချမ်းတယ်။ အစွန်းရောက်တွေကသာ အကြမ်းဖက်တာ. . . စတဲ့ စကားပဲ ကွေ့ပတ်ပြောနေတယ်။ Quran ကျမ်း သင်ကြားချက်တွေ၊ မိုဟာမက် လုပ်ရပ်တွေနဲ့ မွတ်ဆလင်ဝါဒ ယုတ်ညံ့ပုံတွေကိုထောက်ပြရင် ဘာမှ မဖြေရှင်းနိုင်တော့ဘူး။ မွတ်ဆလင်အစွန်းရောက်ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို သုံးတာသုံးနေတယ် . . . အတိအကျပြန်မေးရင် အဖြေမရှိတော့ဘူး။ ( အဖြေမရှိတာ မဆန်းပါဘူး။ ကြက်တူရွေးဆိုတော့ သူများပြောသံကြားတာကို လိုက်ပြောနေကြတာကိုး)
ခင်ဗျားတို့ ဘလော့သမားတွေရေးတဲ့ ကော်မန့်ကလဲ ဘာအဆင့်ရှိလို့လဲ? တစ်ယောက်ဘလော့ တစ်ယောက် အလည်သွားပြီး . . ရေလိုက်ငါးလိုက် မြှောက်ပင့်ပြောတာတွေနဲ့ လက်ညှိးထောင် ခေါင်းညိတ်ပဲလုပ်ကြတယ်။ ဒါမှလဲ ကိုယ့်ဆောင်းပါးရေးရင် ကော်မန့် လှလှလေးတွေ လာရေးမှာမဟုတ်လား။ တကယ်လို့ ဆောင်းပါးအပေါ်မှာ မေးခွန်းထုတ်ကြည့် ဘာမှကို မဖြေတတ်ဘူး။ ဒါနဲ့များကွာ နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ တန်းတူဖြစ်ချင်တယ်ဆိုပဲ။ ဝေးသေးတယ်။
ကြက်တူရွေးဦးဏှောက်နဲ့ ဘလော့သမားတွေကို ငေါက်ရမှစားဝင်သည့်
သီချင်းလေး ကောင်းတယ်နော်။ ဒါပေမယ့် ခုမှ နားထောင်ဘူးတယ်။ ပြန်မျှဝေပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးနော်။
ညီမ ကောင်းမွန်ဝင်း ရေ
အမ နဲ့တူသွားပြီ ကြက်တူရွေးခြင်း ယိုင်းပင်းကြတာပေါ့ .. ငှဲ ငှဲ
ညီမ သီချင်း လေးကိုကြိုက်တယ်.. နားမထောင်ဘူးသေးဘူး စာသားတွေဖတ်သွားတယ် ကမ္ဘာကြီး ငြိမ်းချမ်းစေချင်တယ် ညီမရယ်
အားလုံး ယဉ်ကျေးစွာ သဘောထား ကွဲလွဲ နိုင်ကြပါစေ
ဟောဗျာ အလိုလိုနေရင်း ကြက်တူရွေးဖြစ်သွားရး)))
အဲဒီ့ သီချင်းလေး အရမ်းကြိုက်တယ်။ ဒါက youtube မှာ ဘီလ်ကလင်တန်ရယ် အစ္စရေးက အဆိုတော်ရယ် စုံတွဲဆိုထားတာ။ အစ္စရေးကလေးလေးတွေ အာရပ်ကလေးလေးတွေနဲ့း-)
ခုနက လင့်ခ်မေ့သွားလို့း-)
ကျွန်မကြိုက်သော “အမြည်း” များ
နောက်ဆုံးရေးခဲ့တဲ့ပို့စ်ရဲ့ နေ့စွဲကိုကြည့်လိုက်တော့ ၂၀၁၁စက်တင်ဘာ။ အကြာကြီးပေါ့ စာမရေးဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့် ခင်မင်တဲ့သူတွေရဲ့ဘလော့ကိုတော့အမြဲ...
ဖတ်လိုက်ရတဲ့သူတွေလည်း ရှိမှာပါပဲ။ ကျွန်မကတော့ ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို သပ်သပ်စီဖတ်ခဲ့ပေမယ့် ယှဉ်တွဲပြီး မှတ်မိနေတဲ့ အကြောင်...